VaMatanda Vokurudzirwa Vanhu Kuchengetedza Mari Dzavo Panguva yeCovid-19
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York, uye vari nyanzvi munyaya dzemari, VaCliff Makanda, vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vachengetedze mari dzavo zvine hungwaru sezvo remangwana risina kujeka.
VaMakanda, avo vanoshanda pamusika wemari muguta iri, vanoti kunonoka kuvhurwa kuri kuitwa mabhizimisi pasi rose nepamusoro pe Covid-19, kuchaita kuti dzimwe mhuri dzitarisane nematambudziko ekushaya mari sezvo mamwe kambani achapedzisira avharwa.
VaMakanda vanoti vanoshuwira kuti mabasa eavo vanoita zvemari achange aripo pachavhurwa nyika dzese pari rose.
New York ndiro guta remuAmerica rine vanhu vakabatwa nechirwere cheCovid-19 vakawanda uye kusvina nemusi weChishanu, vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezvisere, vainge vabatwa nedenda iri, uye vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvitatu nezana nemakumi mapfumbamwe nevashanu vainge vafa neCovid-19.
New York ndiyo ine muzinda weStock Exchange, muzinda weUnited Nations nezvimwe zvinokosha zvakaita semabhanga epasi rose.
VaMakanda vanoti panguva ino yekushandira kumba ndipo paunowona kuti vashandi nemabasa avo vakakosha here kana kuti kwete sezvo vamwe vashandi vacharasikirwa nemabasa kana vasingakosheswe kuburikidza neruzivo rwaburitsa neLockdown.
"Ndakatarisira kuti vemakambani vavhure makambani avo sezvo ndisisina kugadzikana kuti ndichange ndine basa here kana kuti kwete sezvo vazhinji vacharasikirwa nemabasa pachavhurwa nyika zhinji nemabhizimisi zvikuru muguta reNewYork," vadaro VaMakanda.
Chirwere cheCovid-19 chakatanga kuChina gore rapera uye chabata vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu pasi rose, uye kuuraya vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi matatu nezvipfumbamwe munyika mazana maviri negumi nenhatu pasi rose.
Nyika dzanyanya kuvhiringwa nedambudziko reCovid-19 inyika dzakapfuma dzakaita seAmerica, Brazil, Russia, Spain, United Kingdom, Italy, France, Germany neTurkey.
Mu Africa, nyika dzabatwa zvakanyanya neCovid-19 dzinoti South Africa, Egypt, Morocco, Algeria, Nigeria, neGhana - dzinova nyika dzakapfumawo mudunhu iri.
Hurukuro naVaCliff Makanda